Ukukhuthaza Umphefumlo Inombolo 22 | Fumanisa intsingiselo - Ukubhula Ngamanani
Umphefumlo Wokukhuthaza Inombolo 22
Ngaba uyazi ukuba umphefumlo wakho unqwenela ntoni? Uyazi ukuba yintoni ekhuthaza izenzo kunye nezigqibo zakho kobu bomi? Okanye leliphi ikhondo lomsebenzi elinokukwenza uzaliseke? Nokuba ubusazi ukuba yeyiphi indlela yakho xa wawungumntwana, kulula kakhulu ukuphazamiseka. Ngombulelo, ukubhula ngamanani ...
Ngaba uyazi ukuba umphefumlo wakho unqwenela ntoni ngokwenene? Uyazi ukuba yintoni ekhuthaza izenzo kunye nezigqibo zakho kobu bomi? Okanye leliphi ikhondo lomsebenzi elinokukwenza uzaliseke?
Nokuba ubusazi ukuba yintoni indlela yakho xa wawusengumntwana, kulula kakhulu ukuphazamiseka. Ngombulelo, ukubhula ngamanani kunokukunceda uphinde ungene kwinjongo yakho kwakhona. Usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokubala, unokufumana amanani abalulekileyo emphefumlo. Oku kubandakanya 'inombolo yakho yamatyala karmic', 'inombolo yakho yendlela yobomi' kunye neyakho ' inombolo yokukhuthaza umphefumlo . Ngelixa sijonga ukukhuthazwa komphefumlo wakho kweli nqaku, kuluncedo ukwazi onke amanani akho okubhula. Kungenxa yokuba amanani onke azisa into eyahlukileyo kubuntu bakho ekunceda ukuba uqonde ukukhuthazeka komphefumlo wakho kwimeko yendlela yakho yobomi kunye nesiphelo sikaThixo. Ukuba awukayiboni itshathi epheleleyo yokubhula ngamanani, cofa apha ukuze ufunde ngenani lasimahla ngokusekelwe kwigama lakho kunye nomhla wokuzalwa.
Ithini inamba yomphefumlo?
Inombolo yokhuthazo lomphefumlo inokuyityhila Umnqweno onzulu womphefumlo wakho. Ukwazi eli nani kunokukunceda ukuba uqonde eyona nto ikhuthazayo kuyo yonke into oyenzayo. Umphefumlo ukhuthaza amanani ahluka kumntu kumntu.
Umzekelo, abanye abantu batyala onke amandla abo ekusukeleni imali, amandla kunye nezikhundla zobunkokeli. Banokuba ngabapolitiki abaphumeleleyo okanye ii-CEO. Sihlala sicinga ngabo njengabangengabo ‘oomoya’ kuba babonakala ngathi baswele ukuthobeka.
Nangona kunjalo, ukubhula ngamanani ayigwebi enye indlela yobomi 'elungileyo' kwaye enye 'embi'.
Aba bantu banokuzalwa benenombolo yomphefumlo efuna ukuba nemali, amandla kunye nempumelelo. Abanye banokuzalwa benomdla womphefumlo obeka imvisiswano kubudlelwane ngaphezu kwayo nayiphi na into.
Inkqubo ye- Inombolo yokukhuthaza umphefumlo inokuchaza ukuba ulibona njani ilizwe , yeyiphi ikhondo lomsebenzi onokulilungela, kunye nokuba ufuna ntoni kwiqabane elithandanayo.
Ubalwa njani umphefumlo womphefumlo?
UPythagoras wayekholelwa ekubeni yonke into, nkqu noThixo ngokwakhe, inokuchazwa njengenani. Wayefuna ukuphonononga ikhonkco phakathi kwentshukumo yezixhobo zomculo kunye namanani. Indlela yokubala inani lomphefumlo wakho wokukhuthaza isekelwe kule migaqo.
inyuka ngokufanayo nokunyuka komqondiso
Ukusebenzela umphefumlo wakho ukubongoza, kufuneka udibanise amaxabiso ezandi zezikhamiso kwigama lakho lokuzalwa. (Khumbula ukusebenzisa izikhamiso ezivela kwigama elipheleleyo onalo ekuzalweni, kubandakanya namagama aphakathi.) Landela imiyalelo elula kweli nqaku ukubala inani lomphefumlo wakho.
Amanani aphezulu kwi-numerology
Kwinombolo yokubala, amanani ahlala ehliswa abe yidijithi enye. Ngaphandle kwe 11, 22 kwaye 33. Ezi zaziwa ngokuba zii ‘master numbers’.
Ukuba inombolo eyi-master iyavela kwitshathi yakho, emva koko wena mhlawumbi uziva ngathi uzalelwe ukwenza into enkulu, okanye ushiye into ebalulekileyo Ilifa emveni kwakho. Kwaye amandla anamandla e-master number akho ukukunceda ufezekise le njongo. Kodwa ukuphatha la mandla kunokuba lucelomngeni. Funda ukuze ufumane okungakumbi malunga neempawu kunye nemiceli mngeni kwinombolo engama-22.
Ithetha ntoni umphefumlo inombolo 22?
Umphefumlo ubongoza inombolo 22 yaziwa ngokuba 'ngumakhi oyingcibi'.
Kungenxa yokuba ukubala ngamanani ngama-22 kunjalo enamandla kakhulu . Inamandla ngakumbi kunalo naliphi na elinye inani lokuguqula imibono kunye nemibono ibe yinyani ebonakalayo. Umphefumlo ukhuthaza inombolo 22 ngumyili wezakhiwo. Ukuba umntu ucacisa umbono wakhe, i-22 iyakwazi ukubona ngendlela eyiyo. I-22 inokuzisa ezona njongo ziphakamileyo kumgangatho womhlaba. Banokuxela ukuba umbono unokubakho ukusuka nokuhamba . Abantu abanomphefumlo onxenxa inani lama-22 bayakwazi ukuzibekela iinjongo kwaye basebenze ngeenkcukacha ezibalulekileyo ekuzaleni umbono ngohlobo lwayo.
Umphefumlo ukhuthaza inombolo 22 ikwabizwa ngokuba ngumakhi oyintloko kuba iqulethe amandla amanani amabini omphefumlo anamandla. Yakhelwe ngaphakathi komxholo wama-22 ngamandla anamandla kunye nobuchule be- inombolo eyi-11. Ikwanayo namandla asebenzayo, asisiseko se Umphefumlo wenombolo 4 . Ngama-22, ukufikelela kukhanyiso kuthetha ukubonakalisa ubumoya babo ngezinto eziphathekayo. Baza kuzaliseka kakhulu xa ukwakha into esebenza ngenjongo enkulu.
Inombolo 22 inokuba nempumelelo emangalisayo kweli hlabathi, mhlawumbi nangaphezulu kwayo nayiphi na inamba yomphefumlo. Nangona kunjalo, akukho mntu ukhululekileyo kwimiceli mngeni. Nkqu ‘nomakhi oyingcibi’ kufuneka ujongane kwaye woyise izilingo ezibalulekileyo ukuze ufikelele empumelelweni.
Unokufumana ukuba unamanani aphezulu kwenye indawo kwitshathi yakho yokubhula ngamanani ukuba injongo yakho ebomini ithatha intsingiselo yokomoya. Unendlela yokuphila, intetho, ikamva kunye nenombolo yobuntu ekufuneka uyiqwalasele xa ufunda malunga nokubala kwakho. Ukujonga ukuba unamanani aphezulu kwenye itshathi, cofa apha ukuze ufunde ngokufundwa kwamanani. Iya kubala onke amanani akho ngokusekelwe kwigama lakho kunye nomhla wokuzalwa.
Amakhondo omphefumlo akhuthaza inombolo 22
Amandla wenombolo 22, umakhi oyintloko, ulapha khonza umhlaba ngendlela enkulu .
Inombolo 22 isetelwe ekushiyeleni ilifa elinamandla nelilungileyo kwihlabathi. Nokuba bakhetha ukulandela ikhondo lezopolitiko, elefilosofi okanye elezemali, kunjalo ubophelelekile ukuba ushiye uphawu lwabo.
Kodwa ngaphandle kwako konke ukubanakho, i-22s isenokufumana ukuthandabuza okungaphakathi. Oku kunokubangela ukuba babe neentloni kumabhongo abo. Inkqubo ye- amandla alo naliphi na inani eliyintloko unokubeka uxinzelelo olukhulu lwangaphakathi kumntu. Ukuthintela olu xinzelelo ekunyukeni, ii-22s kufuneka zigqithe kulo naliphi na ibhongo lobuqu, kwaye sebenzela usukelo oluya kwenza umhlaba ube yindawo engcono.
Nangona ingaqhelekanga, indlela yokuphila yama-22 ayikaze ibe lula.
ubudlelwane be-virgo kunye ne-leo
Banetalente ezininzi kwaye ubomi babalungiselele uhambo olumangalisayo oluya kwenza ukuba abanye abantu babathande kwaye bangabathandi.
Ukuba bayayilandela imiphefumlo yabo , emva koko abanye baya kuvavanya. Kwaye baya kuziva ubunzima obunzima boxanduva olunzima emagxeni abo. Nangona kusonwabisa, ubomi bunokubonisa isiphithiphithi kunye nengxwabangxwaba yama-22s. Kufuneka bakholelwe kwilishwa kwaye bayifezekise injongo yabo ngaphandle kwale mingeni. Ngale meko inamandla, impumelelo iya kulandelwa naphina apho baya khona.
Ubudlelwane bomphefumlo bukhuthaza inombolo 22
Owona mnqweno wakho mkhulu kukushiya ilifa elinamandla kwaye wenze umhlaba ube yindawo engcono. Ngelixa kuncomekayo, oku kunokubangela isiphithiphithi xa kufikwa kubudlelwane bezothando.
Ngaphezulu kwayo yonke enye into, ufuna iqabane eliqondayo.
ngubani ohambelana kakhulu nesagittarius
Inani lama-22 lifuna umntu okhuseleke kuye. Ngenxa yokuzibophelela emsebenzini, i-22s ayinakusoloko ikwazi ukunikezela ixesha elininzi kunye namandla kubudlelwane babo. Iqabane labo liya kufuna ukukuqonda oku.
Uhlobo olunxunguphalayo nolunokuphazamiseka ebomini bakho luya kuthi kusenokwenzeka ukuba kubangele ubudlelwane obuninzi. Kodwa, kuba unesidingo esisiseko esikhuselekileyo, uya kufumana 'Lowo' kwaye uhlale phantsi. Nangona uthembekile kwaye uthembekile, 'Lowo' Kuya kufuneka ube nomonde kwaye ukhathalele . Kuya kufuneka bayiqonde iminqweno yakho yokuba phaya, wakhe ilizwe elingcono labo bonke.
Emva koko, qhubeka nokufumanisa iinombolo ngokufunda iprofayile yakho epheleleyo yokubhula ngamanani. Uya kufumanisa ukuba umphefumlo wakho ukhuthaza njani ukuba unengqiqo kwimeko yohambo lwakho olwahlukileyo ebomini. Cofa apha ukuze ufunde ngenani lasimahla.
Iimpawu kunye nentsingiselo yesilwanyana somoya seTaurus; IBeaver
indlela yokubala indlela yobomi
Iimpawu ze-zodiac ezikhohlisa kakhulu
ikwi-horoscope yeveki ezayo
ubudlelwane be-capricorn kunye ne-scorpio
I-jordan yomoya 1 i-retro ephezulu kunye ne "top 3"
isayina indoda ye-gemini iyakuthanda